घर युरोपियन स्टार ड्यानियल स्ट्रिज बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जसले सर्वोत्तम उपनाम द्वारा जान्छ; "स्टडगर"। हाम्रो ड्यानियल स्ट्रिजज बचपन स्टोरी प्लस अनल्टर्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्मको उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता सम्म पुग्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनीहरूको बारेमा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र बन्द र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो क्षमताको बारेमा चिन्ता छ तर केहिले हाम्रो ड्यानियल स्ट्रिज जीवनीलाई बुझ्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गर्न दिन्छ।
डैनियल स्ट्रिज बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
डैनियल स्ट्रेजज, ग्रेस स्ट्रिज (आमा) र माइकल स्ट्रेजज (बुबा) द्वारा जमैनिस मूलको दुबैतिर बर्मिंघममा सेप्टेम्बर 1 को 1989st दिनमा जन्मेको थियो।
उहाँले बर्मिंघम, हक्कीमा हुनुभयो। यो एक वातावरण थियो त्यो स्थानीय पिचहरूमा फुटबल खेल्दा, आफ्नो परिवारको अगाडि बगैंचा र सबै घरको वरिपरि बल्ला खेल्नको लागी कहिल्यै बिर्सन सक्दिन।
छिमेकीका हरेक बच्चा उनको मनपर्छ।
लिटिल डेनियल स्ट्रिज: सबैको हृदयमा केटा
दानियल हकले माया गर्छन् किनभने यो जीवित र ठाउँको लागि एक सकारात्मक स्थान थियो जसले उसलाई आजको लागि सही ग्राउण्डिङ दिए।
बढ्दै जान्छ, जवान ड्यानियलले आमाबाबुको धेरै संरक्षक थिए। तिनका शब्दहरूमा ...।"हकले केही अपराध गरेका थिए त्यसैले मेरी आमाले मलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्न चाहँदैनन्, र मेरो बुबा एउटै थियो। म एक निश्चित समयमा हुनुपर्दछ किनकि त्यहाँ हाम्रो क्षेत्र वरिपरी हिंसाको धेरै थियो। मेरो बुबा, लियोन कुनै पनि हिंसामा संलग्न थिएन, र उनले निश्चित गरे कि म सम्पूर्ण जीवन शैलीबाट टाढा रह्यो। यो बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ अपराध-निषेधित क्षेत्रमा केहि हुन सक्नुहुन्छ। म ईश्वरको कृतज्ञ हुँ कि म त्यस वातावरणबाट बाहिर निस्कन र आफैलाई केहि बनाउन सक्दिन। "
फुटबल परिवारको पृष्ठभूमिबाट आउँदै गर्दा दानियलले आफ्ना पितालाई चिन्ता गरे र चाकुरहरूले उनीहरूका विवेकहरू जारी राख्न चाहन्थे। प्रभावकारी, उहाँले उनीहरूको प्रारम्भिक संरक्षक जहाज र अभिभावक थिए। उहाँका पिता, माइकलले पेलको आफ्नो छोरा भिडियोहरू देखाउन यो मनमोहक विकास गरे। यो यो थियो कि पहिलो डायनियल फुटबलमा रुचि छ।
दानियलको आफ्नै शब्दमा ..."मेरो पिताले मलाई पार्कमा धेरै कोच गरे, हामीले शंकुहरू छोडेका थियौ र कुकुरहरू सधैं हामीलाई पीछा गरिरहेका थिए। उहाँले मलाई धेरै पेले भिडियोहरू देखाउनुभयो। उहाँले मलाई कौशल देखाउनुहुनेछ र म तिनीहरूलाई गर्ने प्रयास गर्दै अगाडि बगैंचामा जानुहुन्छ। "
डैनियल स्ट्रिज बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -सारांशमा क्यारियर
Sturridge स्थानीय क्लब कैडीबरी एथलेटिक मा छ वर्ष को उमेर मा आफ्नो खेल कैरियर शुरू गर्यो। उनीसँग आफ्नो बुबा र वृद्ध भाइले कोइराला र सल्लाह दिए। यसले उनलाई फुटबलको सुचारु सुरुवात गर्यो।
ड्यानियल स्ट्रिज बचपन स्टोरी: प्रारम्भिक करियर दिन
अस्टोन विलाको जवान अकादमी द्वारा सात वर्षको उमेरमा देखा पर्नु अघि उनले क्लबको सम्पूर्ण 1995 / 1996 सीजन खर्च गर्छन्। उहाँले कोभन्त्री सिटीमा जाने चार वर्ष पछि Villa छोडे, जहाँ उनी 2003 उमेरमा 13 मा मैनचेस्टर शहरको एकेडेमीमा सामेल भए।
अर्को वर्ष, उनी प्रमुख स्क्यानर थिए र सिजनको मतदाता खेलाडी (यो अर्जेन्टिना फुटबलर कार्लोस तेभेजलाई प्राप्त गर्न केवल अर्को व्यक्तिले सिटीको नाइके कप जितेको छ) विश्वको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्गत 15 टूर्नामेंट।
2006-07 सिजनको सुरुदेखि, स्ट्रिरेजले पहिले पहिलो शहरसँग प्रशिक्षित गर्न थाल्नुभयो।
2007-08 सिजनमा, स्ट्रिरिजले युवा एफए कप, एफए कप र प्रिमियर लिगमा उही सिजनमा स्कोर गर्नका लागि मात्र खेलाडी बने। यो एक रेकर्ड हो जुन अहिलेसम्म यो मेल खाएको छ।
2008-09 सिजनको अन्त्यमा, म्यानचेस्टर सिटी फ्यानहरूले स्टुरेजलाई मैनचेस्टर सिटी युवा खेलाडीको सीजनको रूपमा मतदान गरे, जसमा उनले आफ्नो परिवार र उनको चाचा डीनलाई पुरस्कार प्रदान गरे।
मन्चेस्टर सिटीको म्यादमा स्ट्रिरेजको सम्झौताको म्याद समाप्त भयो, उहाँले3जुलाई 2009 मा चार वर्षको अनुबंधमा चेल्सीको लागि साइन अप गर्नुभयो। 31 जनवरी 2011 मा, स्ट्रिजले बोल्टन वेंडररहरूसँग सिजनको अन्तमा ऋण सम्झौतामा सामेल गर्न सहमत भए। उनले बोल्टनमा प्रभाव पारे।
2 जनवरी 2013 मा, स्ट्रिरेजले चेल्सी देखि लीवरपूलबाट एक कदम पूरा गर्यो, एक अज्ञात शुल्क को लागि एक दीर्घकालिक अनुबंध मा हस्ताक्षर गरे जसलाई £ 12 मिलियन को क्षेत्र मा राखन को लागी लाग्यो। बाँकी रहेका ती कुराहरू अहिले इतिहास हो।
डैनियल स्ट्रिज बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
डेनियल स्ट्रिज अमीर परिवारको पृष्ठभूमिबाट हो। उहाँ जमैकन मूलको हुनुहुन्छ, उहाँका सबै दादापट्टिहरू जमैकनहरू जस्तै छन् Raheem Sterling।
DAD: उनको जन्म, माइकल स्ट्रिजज जन्म भएको हुनु अघि एक पेशेवर फुटबलर थियो।
दानियलका शब्दहरूमा ... "जब म बढ्दै गयो, उहाँ एकजना व्यक्ति थिए जसले मलाई प्रशिक्षित गर्यो र मलाई आज के बन्यो। आफ्नो कोचिंग बिना र उनको अन्तर्दृष्टि र दिन र उहाँले मेरो साथ राखेको घण्टा बिना, म यो खेलाडी हुने छैन कि आज म हुँ। मेरो भाइको साथ, उहाँले मलाई सबै चीजहरू सिकाउनुभयो।
माइकल स्ट्रिजज भाइ हो साइमन, डीन, डेभीड र डेरेक र कार्ल स्ट्रिज। उसको बहिनी Ava Sturridge-Packer CBE।
आमामेरो शिक्षामा ड्यानियलको माम अत्यन्तै ध्यान केन्द्रित थियो। उनी उनलाई विद्यालयमा फोकस गर्न चाहन्थे किनभने उनी एक विद्यालयमा काम गर्थे। त्यो उनको लागि ठूलो थियो।
ड्यानियल स्ट्रिज र आमा- ग्रेस स्ट्रिज
न केवल ड्यानियल डेनमार्क खेल्ने खेल खेल्न सक्ने क्षमता छ, तर पिचबाट उसले भान्सामा पनि ड्याब हातको एक सा छ, यति धेरै कि Sturridge परिवारले आफ्नै आफ्नै क्यारिबियन रेस्टुरेन्ट खोलेको छ। बर्मिंघम, जहाँ उहाँ जन्मेका थिए र उहाँका आमाबाबु अझै पनि बस्नुहुन्छ।
र यो Sturridge मा मा हुनेछ, जसले उनले भन्यो कि राम्रो खाना र पकाने को लागि आफ्नो प्रेम को प्रभावित।
UNCLES: Sturridge पूर्व फुटबलरहरूको भतिजा हो डीन र सिमन स्ट्रिज.
ड्यानियलको चाचा, डीन एक दशकको लागि डेबी काउन्टीको साथ अगाडि बढे, पाँच वर्ष पछि प्रिमियर लिगमा खर्च गरियो। चाचा सिमोन स्टोक सिटीको लागि बाहिर गए, जबकि डेनियलका पिता माइकल फिनल्याण्डमा खेले। दुवै डीन, सिमोन र माइकल स्ट्रिजिज (ड्यानियलका पिता) सबैले आफ्नो पेशेवर क्यामेराको एकैचोटि स्प्यान गर्दै थिए।
दानियल अनुसार ..."तिनीहरूले मेरो लागि बाटो प्रशस्त गरे र मैले सानो हुँदा उनीहरूलाई हेरे। मेरो स्टुका प्लेबी र मेरो अन्य चाचाको लागि स्टुकको लागि प्ले हेर्नको लागि खुशी थियो। मैले मेरो बुबालाई बेटाम्याक्स रेकर्डिङमा घरमा खेल्दै देखेँ र उनले फिनल्याण्डमा खेल गर्दा मलाई पुरानो खेलहरू देखाउँथे। उनले केही राम्रो लक्ष्य पनि बनाए। "
भाइरस: ड्यानियलले लियोन स्ट्रिज नाउँ गरेकी एक वृद्ध भाइ हो। उनी फुटबलमा एक दिन देखि चासो थिएनन्। उहाँ पहिलो बच्चा हुनुहुन्छ र माइकल र ग्रेस स्ट्रुजका छोरा हुनुहुन्छ।
डेनियल एक पटक भने त्यहाँ कुनै भाइ बहिनी र लियो कहिल्यै कहिल्यै पनि छैन। उनको शब्दहरुमा ..." लियोन सधैं 100% समर्थनकारी भएको छ। त्यहाँ कुनै ईर्ष्या छैन। र त्यो सबै मा छ, फुटबल मात्र होइन। मेरो परिवारमा कुनै ईर्ष्या छैन र यो एक कुरा हो कि मेरो आमाबाबुले हामीलाई कहिल्यै सिकाउनुभएन। हामी सधैं उत्प्रेरित गर्न र प्रशंसा ल्याउन र सफल हुन एकअर्कालाई मद्दत गर्न सिकाउनुभयो; एकअर्कालाई ईर्ष्या नगर्ने "
सिस्टर: ड्यानियल स्ट्रिजले चेरीले स्ट्रिज नाउँ गरेकी ठूला बहिनीको रूपमा लिइन्। त्यो उहाँ भन्दा4वर्ष भन्दा पुरानो छ। तल चेरेल स्ट्रिज र जॉन टेरीको चित्र हो।
ड्यानियल स्ट्रिजको ठूलो बहिनी- चेरीले स्ट्रिजज जॉन टेरीसँग
कोइन्स: ड्यानियलले नाममा3चचेरे भाईहरू छन् वारेन, जोर्डन र एलिशाa स्ट्रिज।
डैनियल स्ट्रिज बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
पहिलो, दानियललाई कहिल्यै गम्भीर सम्बन्ध राख्न प्रयोग गरिएन। उनी प्रायः आफ्ना प्रशंसकहरूलाई इन्स्टाग्राममा फोटो र भिडीयोमा व्यवहार गर्छन्, तर उनी आफ्नो छेउमा एक महिला संग कहिल्यै चित्रण गर्दैनन्। उनको अफ-पिच रोमांसको रूपमा धेरै गहन छैन सर्जियो रामोस र गोंजोलो हिगुआन.
यो उनले आफ्नो सम्बन्ध जीवन कसरी देखाएको थियो ..."म मेरो परिवारलाई सुरू गर्न चाहन्छु। मलाई यकीन छैन कि किस प्रकार को पिता म हुनेछ तर आशा छ कि म एक सुन्दर हुनेछु। र आशा छ कि मेरो बच्चा मेरो बारेमा केहि कुरा गर्न सक्षम हुनेछ। त्यो म दयालु व्यक्ति हो, र त्यो मेरो बच्चा संग आशा गर्ने सम्बन्धको प्रकार हो।
पछि, यो कस्तो भयो !!
डेनियल स्ट्रिज ट्विटरमा गएपछि प्रशंसकहरू जहाँ डराउँथे उनीहरूले आफ्नो जीवनमा एक महिलाको आवश्यकतालाई बताउँछन्। स्ट्रिज जसले सोशल मिडियामा आफ्नो जीवनको धेरै साझा गर्न जान्दछन्, र प्रशंसकहरूसँगको लगातार कुराकानीले आफ्ना अनुयायीहरूलाई भने:
ट्वीट गर्न केही घण्टा पछि, केहि मिडियाले आउटसोर्सिंगले उनीहरूको सामाजिक गुणहरूलाई सम्भावित महिलाहरूका लागि प्रकट गरेका थिए जसले उनीसँग गम्भीर सम्बन्ध राखेका थिए। यो केहि निम्नानुसार पढ्छ;
-He शारीरिक रूप देखि धेरै फिट छ - उहाँले उधारो यसलाई तपाईंलाई राख्नुभएमा, उसलाई डेटिङ व्यक्तिगत प्रशिक्षकको जस्तो छ!
-He तपाईले आफ्नो नम्बर एक राजदूतको रूपमा सबवेमा छुट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
-उहाँ साबित भएको छ कि सँगी लिवरपूल एफसी खेलाडी जोर्डन आईबी संग रैपिङ प्रतियोगितामा भाग लिन पछि उनको हास्यको राम्रो भावना छ।
-उनी तिनिय तम्पाह, फरायल विलियम्स र ड्रेक जस्ता ताराहरू बीच जीवन बिताउने काम गर्छन्, त्यसैले तपाईं अतिथि प्लसमा आफ्नो प्लसको रूपमा पाउनुहुनेछ!
यो सुपरमार्केट जोरदान डन जसले अन्ततः आफ्नो हृदय जित्यो। जोरडन एक अंग्रेजी फैशन मोडेल र अभिनेत्री हो। उनी 2006 मा हम्सस्मिथ प्राइममा पत्ता लगाइरहेका थिए र पछि केही समय पछि लन्डनमा थोरै मोडल व्यवस्थापनमा हस्ताक्षर गरे। प्रारम्भिक 2007 मा अन्तर्राष्ट्रिय रनवेमा देखा पर्न थाल्यो।
जोरडन डन र ड्यानियल स्ट्रिज लगातार लगातार घनिष्ठ भएकाले उनीहरुले डेटिङ सुरु गरे। तिनीहरू तल यस प्रकारका क्षणहरूको बाहेक अरूको सम्बन्ध निकै शान्त रहन्छन्।
डैनियल स्ट्रिज गर्लफ्रेंड
डैनियल स्ट्रिज बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -लक्ष्य उत्सवको उत्पत्ति
मान्छेले भन्यो ड्यानियल स्ट्रिजजले चल्ने जस्तै Jagger.
फेरि, सबै चीजहरु जुन मान्छे को अधिकांश भन्दा स्ट्राइकर को बारे मा जानना चाहते हो, शायद शायद उत्पत्ति या उनको परिचित जागर लक्ष्य उत्सव को अर्थ हो। Sturridge आफ्नो प्रशंसकहरु को सामने मिश्र - शैली नृत्य दिनचर्या प्रदर्शन गर्न प्यार गर्दछ।
इङ्गल्याण्ड अन्तर्राष्ट्रिय एक पटक बुझ्यो GQ पत्रिकासँग साक्षात्कार: "यो आयो जब मेरो आए र मेरो भाइ र मेरो चचेरे भाईहरु मेरो घर मा थिए। हामी एक बिट को भनाई छ र केहि संगीत बजाउँदै थिए र मैले नृत्य गरें। फेरि मैले यसलाई एक नाइट क्लबमा काम गरें र त्यसपछि मानिसहरू जस्तै थिए: 'तपाइँ यसलाई एक उत्सवको रुपमा गर्नु पर्छ' र त्यसपछि यो किसिमको बस फँस्यो। "
केही फ्यानहरूले यसको मजाक गरे। उदाहरणलाई तल देखाइएको छ।
यसको सन्दर्भमा यो पहिलो प्रयोग हो, स्ट्रिजज जगर नृत्य पहिलो पटक 2004 मा प्रयोग भएको थियो जब उनको बार्सिलोना विरुद्ध नाइके प्रिमियर कपमा खेल भएको थियो। त्यसपछि 15 वर्ष पुरानो नेटको पछाडि भेटियो, र स्मरणात्मक नृत्यको साथ जसको उनले पिचमा पहिलो पटक गरे। यद्यपि यो समय मा एकदम थोडा र मूर्ख देखिन्छ। दानियलले यसमा सुधार गरेको छ।
डैनियल स्ट्रिज बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -कालो ड्रेस भावना
पिच बन्द, Sturridge एक विविध विविधता छ रुचाउँदो व्यस्त रहन। उनीसँग कालोमा कालोको लागि ठूलो जुनून छ। उनले यकीन छ कि उनले सबै भन्दा राम्रो ब्लैक डिजाईनियर गियर मा सबै भन्दा बाहिर कस्ट आउट गरे।
र विशेष गरी, यसको अर्थ सबै नवीनतम प्रशिक्षकहरू पहने।
डैनियल स्ट्रिज बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -एक पल्ट एक डर्बी काउन्टी र शस्त्रागार फैन
स्ट्रिज डेबी काउन्टीको समर्थन गर्न प्रयोग गर्दा उनी साना थिए किनभने उनको चाचा डीनले उनलाई खेलेका थिए। तर एक पटक डेन बायाँ, Sturridge आफ्नो शस्त्रागार शस्त्रागार स्विच।
डैनियल स्ट्रिज बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -धर्म
स्ट्रिज ईसाई हो। प्रीमियर लीग प्लेयर महिना को अवार्ड जितने पछि, Sturridge ले भन्यो, "म सबै [मार्फत] ख्रीष्ट गर्दछु जसले मलाई बलियो बनाउँछ।"
धर्मले 24 वर्षको उमेरमा एक मजबूत भूमिका खेल्छ, Sturridge एक भक्ति ईसाई संग, आकाश को इशारा द्वारा देखे भगवान को धन्यवाद कि मार्कर जब पनि लाल को लागि शुद्ध को पाउँछ पाउँछ।
"मैले सोधे कि मैले भगवानमा मेरो विश्वास गरेको छु, धेरै प्रार्थना गरिरहेको छ, प्रशिक्षण क्षेत्रमा कडा परिश्रम गरिरहेको छ र आफैलाई व्यक्त गर्दछु, मेरो प्राकृतिक खेल खेल्दै र मेरो प्राकृतिक अवस्था पनि खेलिरहेको छ" Sturridge सीएनएन विश्व विश्वलाई लक्ष्यको अगाडि आफ्नो भर्खरै रातो-रातो ढाँचा वर्णन गर्न।
डैनियल स्ट्रिज बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -एक दानकर्तादाता
स्ट्रिज सक्रियतापूर्वक काममा संलग्न छ, अक्सर प्रायः युवा खेलाडी फुटबलमा संलग्न हुन मद्दत गर्दछ। 2012 मा, चेल्सी को लागि खेल्दा, उनले € 50,000 स्ट्रीट लीग को चेक को रूप मा प्रस्तुत गरे, युरोप भर मा खराब खिलाडियों को मदद को लागि समर्पित एक दान को फुटबल मा पुगयो।
ग्रीष्मकालीन 2013 मा, स्ट्रिराजले उनको पछि पोर्टेमोर, जमैकामा उनको नाम राखेका दानविद्या आधार खोलेको, जसले युवाहरूलाई त्यहाँ खेल र मनोरञ्जनमा मद्दत पुर्याउन मद्दत गर्यो।
उनीहरूले स्टुर क्लास मनोरञ्जन रेकर्ड कम्पनीको पनि मालिक बनाउँछन्।